Umkhiqizi nomhlinzeki we-Vortex flow meter | ANGJI
XJXW Series Flow Imitha
Isiguquli se-vortex ehlakaniphile isekhethi elisha elihlanganisiwe le-vortex flowmeter elenziwe inkampani yethu. Isiguquli singasetshenziswa njengethuluzi elifanele likaphethiloli, amakhemikhali, amandla, insimbi nezinye izimboni, ngemisebenzi yokugeleza, ukushisa nokutholwa kwengcindezi kokukodwa, kanye namazinga okushisa, ingcindezi kanye nesinxephezelo esizenzakalelayo.
Isibonisi se-1.LCD ichashazi le-matrix, isilinganiso sokugeleza esheshayo nokugeleza okuphelele kanye nokushisa kanye nenani lengcindezi kungakhonjiswa ngasikhathi sinye nokukhanya kwangemuva kokukhanya okuphezulu, ukusebenza okulula nokucacile.
I-2.The dual probe technique ingathuthukisa ngokuphumelelayo ukuqina kwesignali yokuthola futhi ivimbele ukuphazamiseka okubangelwa ukudlidliza kwepayipi.
I-3.K-Factor linearity: I-XJWJ inikeza amaphuzu ayi-1 kuye kwayi-10 ukulungiswa kwe-k-Factor.
Ukwamukela ukulawulwa kokuthola inzuzo ngesikhathi sangempela kanye namasu wokuhlunga okubukwayo okuguquguqukayo amasiginali wokuphazamiseka abangelwa ukudlidliza nokuguquguquka kwengcindezi acindezelwa ngempumelelo.
5.Easy ukusebenzisa: Setha kuphela imingcele ethile ngesoftware noma ukhiye wedivayisi, Ingasetshenziswa ukukala igesi, uketshezi noma umusi wento ehlukile.
I-chip eyi-16 bit microcomputer chip inezinzuzo zokuhlanganiswa okuphezulu, usayizi omncane, ukusebenza okuhle nokusebenza okuqinile kwawo wonke umshini.No izingxenye zomshini ezihambayo, ezizinzile nezithembekile, impilo ende, ukusebenza isikhathi eside ngaphandle kwesondlo esikhethekile.
I-7.Intelligent flow meter flow probe, i-microprocessor, ingcindezi kanye nenzwa yokushisa (Pt100or Pt1000) kokukodwa, thatha inhlanganisela eyakhelwe ngaphakathi, yenze isakhiwo sihlangane kakhudlwana, singageleza, ingcindezi nesilinganiso sokushisa kuketshezi ngqo, kanye nesikhathi sangempela esizenzakalelayo ukulandelela isinxephezelo nokulungiswa kwesici sokucindezelwa.
Ngobuchwepheshe be-EEPROM, ukusethwa kwepharamitha kulula futhi kungagcinwa unomphela, futhi idatha yomlando omude kakhulu ingagcinwa unyaka owodwa.
I-9 inomsebenzi wokuzihlola, imininingwane ecebile yokuzihlola, elula yomsebenzisi ukuyilungisa nokulungisa iphutha.
10.namasethingi wephasiwedi azimele, umsebenzi wokulwa nokweba unokwethenjelwa, imingcele, ukuvunyelwa okuphelele nokulinganiswa kungasethwa emazingeni ehlukene amaphasiwedi, ukuphathwa okusebenziseka kalula;
I-11.Isiguquli singakhipha imvamisa ye-pulse, isiginali ye-4 ~ 20mA ye-analog, futhi ine-interface ye-RS485, ingaxhunyaniswa ngqo ne-microcomputer
Isiguquli sikhombisa ukujikeleza okungu-360 degree, futhi kulula ukufaka nokusebenzisa
Ukusetshenziswa kwamandla kwawo wonke umshini kuphansi, ukunikezwa kwamandla wangaphandle namandla kagesi webhethri kunganikezwa, futhi imodi yokunikezwa kwamandla ingashintshwa ngokuzenzekelayo.
Ukukhishwa kwe-alamu yemingcele ye-14.Multi ebonakalayo, engakhethwa ngabasebenzisi, ikhiphe isignali yokushintsha.
Inkomba yokusebenza kagesi
Ukunikezwa kwamandla: 24VDC + 15%, kokukhipha okungu-4 ~ 20mA, okukhipha i-pulse, okukhipha i-alamu, i-RS-485 njll.
Ukunikezwa kwamandla kwangaphakathi: 1 amaqembu we-3.6V lithium battery (ER26500) angasetshenziswa iminyaka emi-2, lapho i-voltage ingaphansi kuka-3.0V, inkomba yokungasebenzi
Ukusetshenziswa kwamandla komshini wonke
Ukunikezwa kwamandla kwangaphandle: <2W
Ukunikezwa kwamandla ebhethri: ukusetshenziswa kwamandla okujwayelekile kwe-1mW, kungasetshenziswa isikhathi esingaphezu kweminyaka emibili
Imodi yokukhipha i-Pulse
A. isignali ye-pulse signal, i-pulse signal flow flow sensor, okukhipha okukude kwe-amplifier, izinga eliphakeme elingaphezu kuka-20V nezinga eliphansi elingaphansi kuka-1V; ukukhishwa kwemvamisa, okukhipha okungu-0-5000HZ, ukugeleza okuhambisanayo, le parameter ingasetha inkinobho
B. isignali ye-pulse elinganayo, ukukhishwa kwe-amplifier okuhlukanisiwe, izinga eliphakeme elingaphezu kuka-20V futhi izinga eliphansi lingaphansi noma lilingana ne-1V, ivolumu yeyunithi ingasethwa egameni lobubanzi be-pulse: 0.0001m3 ~ 100m3.
Qaphela: ukukhetha okukhiphayo okulinganayo kwe-pulse signal frequency kungaphansi noma kulingana no-1000Hz; Ingafaniswa nesilawuli se-valve esenziwe ngohlelo lwe-IC ikhadi lokukhokha kusengaphambili, i-amplitude yesiginali ephezulu yokukhipha inkulu kune-2.8V, i-amplitude esezingeni eliphansi ngaphansi kuka-0.2V
Ukuxhumana kwe-RS-485 (ukuhlukaniswa kwe-photoelectric)
usebenzisa i-RS-485 interface, ingaxhunyaniswa ngqo nekhompiyutha yokusingathwa noma itafula lokubonisa elikude elikabili, izinga lokushisa eliphakathi, ingcindezi nokugeleza kwevolumu ejwayelekile kanye nokujwayelekile ngokushisa nokucindezelwa kwengcindezi ngemuva kwevolumu ephelele
Isiginali yamanje ejwayelekile engu-4 ~ 20mA (ukuhlukaniswa kwe-photoelectric) nevolumu ejwayelekile ilingana ne-4mA ehambisanayo, 0 m3 / h, 20 mA ehambelana nevolumu ephezulu ejwayelekile (inani lingasethwa kumenyu yezinga), ejwayelekile: izintambo ezimbili noma izintambo ezintathu, i-flowmeter ingakhomba ngokuzenzakalela imodyuli efakiwe ngokuya ngokufanele okukhiphayo okwamanje
Lawula ukuphuma kwesiginali ye-alamu
Isiginali ye-alamu (LP): ukuhlukaniswa kwe-photoelectric, i-alamu ephezulu, i-alamu ingasethwa, i-12V ~ + 24V voltage esebenzayo, umthamo omkhulu wamanje we-50mA
Isiginali yesixwayiso (UP): ukuhlukaniswa kwe-photoelectric, i-alamu ephezulu, i-alamu ingasethwa, i-12V ~ + 24V voltage esebenzayo, umthamo omkhulu wamanje we-50mA
C. ukuvala ukuphuma kwe-alamu ye-valve (isilawuli sekhadi le-IC elinokuphela kwe-BC): isekethe yokukhishwa kwesango elinengqondo, okukhiphayo okujwayelekile okuphansi, i-amplitude ingaphansi noma ilingana no-0.2V; izinga lokukhipha i-alamu, i-amplitude inkulu kune-2.8V, ukumelana nomthwalo kukhulu noma kulingana no-100k
D. okukhipha i-alamu yebhethri yokungasebenzisi i-alamu (isilawuli sekhadi le-IC elinokuphela kwe-BL): isifunda sokukhishwa kwesango elinengqondo, okukhipha okujwayelekile okuphansi, i-amplitude ingaphansi noma ilingana no-0.2V; izinga lokukhipha i-alamu, i-amplitude inkulu kune-2.8V, ukumelana nomthwalo kukhulu noma kulingana no-100k
Ukukhishwa kwe-3-wire Pulse, amandla we-Battery, okuphezulu nangaphansi komkhawulo wokukhipha i-alamu, isikhombimsebenzisi se-IC card interface
2-wire 4 ~ 20mA okukhipha; Ukukhishwa kwe-2-wire Pulse, i-Battery-powered, IC interface interface interface
2-wire 4 ~ 20mA okukhipha; Intambo engu-2 enokukhishwa kwe-RS485,2-wire Pulse okukhiphayo; Inikwe amandla ngebhethri, isikhombimsebenzisi sekhadi le-IC
3-wire 4 ~ 20mA okukhipha, 3-wire Pulse okukhipha, Battery-amandla, IC ikhadi isilawuli interface, Upper futhi umkhawulo ephansi alamu okukhipha
4-wire 4 ~ 20mA okukhipha, 3-wire Pulse okukhipha, Battery-amandla, Upper futhi ephansi umkhawulo alamu okukhipha, IC ikhadi isilawuli interface
Intambo engu-3 enokukhishwa kwe-RS485,3-wire Pulse okukhiphayo, okunikwe amandla ngebhetri, okuphezulu nangaphansi komkhawulo wokukhipha i-alamu, isikhombimsebenzisi se-IC card interface
I-3-wire nge-RS485,3-wire 4 ~ 20mA okukhiphayo, okukhipha i-3-wire Pulse, okukhishwa ngebhetri, okuphezulu nangaphansi komkhawulo wokukhipha i-alamu, isikhombimsebenzisi se-IC card interface
4-wire nge-RS485, 4-wire 4 ~ 20mA okukhiphayo, oku-3-wire Pulse okukhiphayo, ibhetri-powered, Upper and lower limit alarm alarm, IC card controller interface
Langaphambilini I-flowmeter ye-Turbine
Intengo yeVortex Flowmeter
Imitha yegesi ephendulwa ngamanzi